I-CAD isondela kwi-GIS | I-GeoInformatics ngo-Matshi 2011-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-CAD ifikelela kwi-GIS | GeoInformatics Matshi 2011
Kule nyanga i-edition entsha yeGeinformatics ifikile, kunye neengqungquthela ezinobudlova kwi-CAD, i-GIS, ukuqonda okude, ukuphathwa kwedatha; imiba engakwazi ukubonwa yedwa. Ngokomgaqo, ndinika uhlalutyo lwenye yezihloko ezithandayo, ekugqibeleni into ethile isishwankathelwe kwezinye izihloko zolu daba.
I-AutoDesk inezicwangciso ezinzulu zokungena kwi-SIG.
Inqaku elikhulu elisekelwe kwintlanganiso yodliwano-ndlebe noGeoff Zeiss, oyingcali kwiingxelo ze-AutoDesk eziziganeko zee-geospatial ezisixelela malunga neenjongo zenkampani zikhokelela kulo mbandela, ngombono obalulekileyo wabasebenzisi bawo.
Imbali ye-AutoDesk ide, nangona ihlawula kwi-geospatial issue ukususela kwe-AutoCAD Imephu kwi-1996, xa i-Oracle iqalise i-SDO.
Emva koko kwafakwa i-AutoCAD Civil 3D, kwi-2005, ngonyaka u-Google Earth ubonakala.
Okona kubalaseleyo okwangoku kukwicandelo le-GIS, ebelisebenza ngokwahlukeneyo, oku kongezwe kwicandelo elikhulu elibizwa ngokuba yi-AEC (Architecture, Engineering kunye neKwakha). I-AutoDesk ifuna ukubheja kwimodeli ye-BIM ngendlela ebanzi, ethi ngamagama ambalwa ishwankathelwe njengomgangatho apho siyeke khona ukubona iivektri kwaye sibone izinto ezikrelekrele ezivela kwilizwe lokwenyani, njengezindlu, iindonga, iipasile, iindlela, iibhlorho, ezineempawu ezingaphaya ye3D, kubandakanya indleko kunye nembali yentengiselwano ngexesha elinje ngovavanyo, iindleko zokutshintsha, imveliso, uhlaziyo, njl.
Ayisiyo ukuba i-AutoDesk ayisekho kumxholo, eyenzekayo kukuba ukubekwa kweemveliso kujikeleza (ngaphandle kweopopayi) malunga neYilo, ubuNjineli boLuntu kunye neZakhiwo. Oku kubonakala ngokwamkelwa kwe-Inventor, Revit kunye ne-Civil 3D; Kodwa ezo zisombululo ziyaqhubeka ngokwenjongo yoyilo, kuncinci kakhulu okwenziweyo kulondolozo lwexesha elide lweziseko zophuhliso ngokudibanisa idatha evela kumacandelo ahlukeneyo kunye neemveliso ezinjenge-AutoDesk Utiliy Design kunye neTopobase. Kuya kufuneka silinde ukuba yeyiphi imveliso yeProjekthi kaGalileo, eyenye yezona zinto zintsha ezenza ukuba uvavanyo lwe-AutoDesk lube luvavanyo.
Siphinde sicinge, ukuba kwiinguqulelo ze AutoCAD 2012 eziza kuqaliswa, siyakubona ukuhambelana kwemizila ehambelana ngokufanelekileyo I-imodeli yeBentley Systems, ngamagama ahlukeneyo kodwa zombini ukubheja kwisihloko esifanayo apho oonjiniyela, abakhi bezobugcisa, abaphenyi kunye nabathengi bezentlalo bazuza kwi-geospatial.
Nangona ibala lokusebenziseka libanzi kakhulu, i-BIM iseyi-astral concept, kunzima kuthi ukuba siyeke ukubona iparallelogram njengodonga. Mhlawumbi ngenxa yokuba amaxabiso amaqumrhu kubuNjineli boLuntu yinto engenamsebenzi kwaye inika amandla, nkqu nakwintsimi yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, ibhalbhu ekhanyayo evela kwigumbi ayixabisekanga kulondolozo; Nangona kunjalo, isifundo sinomdla kakhulu kwimeko yezityalo zeshishini apho ivelufa inokuxabisa i-US $ 10,000 kwaye ukuba ulondolozo lwayo aluhoywanga, inokubangela ilahleko ezizigidi.
Ewe ewe, siza kubona i-BIM isetyenziswa kumcimbi we-CAD-GIS, kwaye isihloko esiza kusigcina sisonwabisa iya kuba zizixeko ezikrelekrele (iidolophu ze3D), ezingamtsalane kangako kumazwe asaphuhlayo kodwa ephuhliswa ngawo kumazwe anjengeMelika. I-United, iJamani, i-United Kingdom, i-Kuwait ne-China, siza kubona imeko engenakuphikiswa kule minyaka ilandelayo. Sithetha ngaphezu kokubona izakhiwo zimodolojiwe ngobukhulu obuthathu ngobunjalo bazo kunye namafu adlula esibhakabhakeni (nokuba iGoogle ingakwenza oko); Imalunga nokudityaniswa koyilo lwesixeko sonke esingqongileyo esingasetyenziswanga ngokubanzi ngendlela enje, njengomngcipheko weentlekele zendalo, ukutshintsha kwemozulu, kunye nolawulo lwezixhobo zendalo.
Isifundo sinqumleza, kwaye ukuba i-AutoDesk iya apho, abanye baya kulandela, ukuba abekho kububanzi okanye umbono, baya kwenza oko ngokuhambelana. Amatyala anjengokwakhiwa ngokutsha komonakalo eJapan emva koku tsunami bangaba mizekelo emihle, banikwe ukuthuthwa kweendawo zokuhlala kunye nendlela yokulawulwa kwemimandla apho izinto ezingabonakaliyo ziyimimiselo enyanzelisayo yolawulo kunye nokubeka iliso.
Ezinye izihloko ezinomdla kumaphephancwadi
Eminye imixholo egutyungelwe lolu hlelo lweGeoinformatics isenomtsalane. Usizi lokuba uguqulelo lweFluid luhamba kancinci, kungcono ucinezele iqhosha ukuze ulibonise kwi-pdf, linda ithutyana ukuze ulayishe, emva koko ucofe ekunene kwaye ukhuphele apha ekhaya.
Ubungakanani bemifanekiso kwi-geospatial field. Kule nqaku liboniswa njani, indlela esebenzisayo ngayo esiyinike imimandla yeemfono imihla ngemihla njengemida apho iqondo elikude lifika khona.
WG-Hlela, ukwandiswa kwe-gvSIG entsha. Elinye inyathelo le-gvSIG ekusasazeni kwayo kwintengiso ye-geospatial, ethi ikwiphephancwadi elinokusasazeka okunje ibonakalise ukubanakho kwale software yasimahla ekwenzeni ubuqu. Ngumsi, owenza ukuba ukwandiswa kolawulo lweedatha zeziseko zendlela kwingingqi yase-Itali kwaye sinokubona nge-6th. iihambo.
Iphupha ekuthinjweni kwedatha yesatellite. Esi sihloko sigutyungelwe ngenqaku apho sixelelwa ukuba ukusukela ngonyaka ka-2014 sizokwazi ukuba nedatha yokuphakama komhlaba ngokuchanekileyo, ukuba konke kuhamba kakuhle ngesethelayithi yaseJamani ye-TanDEM-X eyasungulwa ngoJuni 2010. Sithetha ngeemitha ezi-2. yokuchaneka ngokuthe nkqo ukuya kuthi ga kwiimitha ezili-10 zokuchaneka ngokupheleleyo. Lo mfanekiso ulandelayo sisampulu yeTunupa Volcano kunye nendawo yeSalar Uyuni yaseBolivia.
I-ERDAS ihamba njani? Kukho inqaku elipheleleyo malunga nezinto ezinokubakho zale software, zombini ezivela kwi-ERDAS Khawucinge, olona hlobo lwaziwayo kwihlabathi kubasebenzisi be-GIS, kunye ne-LPS, esisicelo esijolise kwiinkampani ezenza iimveliso zeefoto, izandiso zeArcGIS kunye neApollo Isixhobo sokunethezeka sokubona idatha evela kwimithombo eyahlukeneyo, yendawo, iinkonzo zeemephu zewebhu kunye nemigangatho ye-OGC. Nditsho inqaku lishwankathela ezinye zeendlela zenkampani, phakathi kwayo ukuphuculwa kwayo kwiinkqubo ezininzi zokuphucula ukusebenza kwamaqela kuyamangalisa. GPU.
Ndiyincoma Gcina iliso kwiphephancwadiNdisifingqole ezinye zezinto ezibambisayo.